परमेश्वरको क्रोधको ठूलो दाखमद्यको चुचुरो कुँद्दै - येशू ख्रीष्टको प्रकाश
मे १९, २०२२ अप्रिल ३०, २०१९ द्वारा प्रकाशक
प्रकाश को अध्याय 13 मा झूटा ईसाई धर्म को छल, एक जनावर को रूप मा, उजागर गरिएको छ। फलस्वरूप, प्रकाश 14 औं अध्यायमा, हामी अब देख्न सक्छौं कि त्यहाँ एक समय छ जहाँ बाइबलको सत्यता र साँचो ईसाई जीवनको स्पष्ट दर्शन भएका मानिसहरू छन्। यस स्पष्ट दर्शनको कारण, यी इसाईहरूले अब बेबिलोनको कपट (जसले झूटो, अविश्वासी ईसाई धर्मलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ) देख्न सक्छन्। फलस्वरूप उनीहरूमा यो पाखण्डको बिरूद्ध अडान लिन सक्ने क्षमता छ।
तर 14 औं अध्यायको अन्त्यले पहिले नै उल्लेख गरिएका घटनाहरू पछ्याउनै पर्ने सन्देश देखाउँछ। र यो सन्देशले पृथ्वीको दाखको बोटलाई देखाउँछ (भ्रष्ट धर्मको फल) फसल काट्न र परमेश्वरको क्रोधको दाखमद्यमा थिच्न। यो आवश्यक छ, किनभने धेरै मानिसहरू भ्रष्ट धार्मिक शिक्षाहरूको फलबाट मुक्त हुनेछैनन्, जबसम्म तिनीहरूमाथि न्याय खन्याइएको छैन।
प्रकाश किन परमेश्वरको कडा न्यायले भरिएको छ?
परमेश्वरको स्पष्ट प्रकाश सन्देशको न्यायले मात्र मानिसहरूलाई तिनीहरूको शारीरिक सोच र तर्कबाट पूर्ण रूपमा मुक्त गर्न सक्छ। र तिनीहरूले धोका पाएको झूटको आत्माबाट मुक्त। वाइन-प्रेस निर्णय सन्देशको दबाब तिनीहरूलाई मुक्त गर्न डिजाइन गरिएको हो। तर झूटा शिक्षा र कपटलाई मन पराउनेहरूका लागि, न्याय अत्यन्त अप्रिय छ!
‘प्रमोशनको लागि न पूर्वबाट आउँछ, न पश्चिमबाट, न दक्षिणबाट । तर परमेश्वर न्यायकर्ता हुनुहुन्छ। उहाँले एउटालाई तल राख्नुहुन्छ र अर्कोलाई स्थापित गर्नुहुन्छ। किनकि प्रभुको हातमा कचौरा छ, र दाखमद्य रातो छ। यो मिश्रणले भरिएको छ; र उहाँले त्यसबाट खन्याउनुहुन्छ: तर त्यसका खाडलहरू, पृथ्वीका सबै दुष्टहरूले तिनीहरूलाई बाहिर निकाल्नेछन् र पिउनेछन्।” ~ भजनसंग्रह ७५:६-८
त्यसोभए यो वाइन-प्रेस दर्शनले हामीलाई के देखाउँछ कि परमेश्वरको आत्माले सँधै भ्रष्ट धर्मको न्याय गर्नुहुन्छ, जब तिनीहरू काम पूरा गर्न स्पष्ट स्ट्यान्डआउट चर्च थिएनन्। सुसमाचारको दिनको हरेक युगमा, कपटलाई परमेश्वरको क्रोधपूर्ण न्यायको दाखमद्यको प्रेसमा फ्याँकिएको छ। यो यसरी गरिएको थियो कि अरूले अझै पनि के सही र गलत के हो भन्ने बारे केही बुझ्न सकून्, र भ्रष्टाचारको बावजुद के सही हो। आज, साँचो सेवकाई (तलको धर्मशास्त्रमा स्वर्गदूत सन्देशवाहकहरू द्वारा प्रतिक) बाट साँचो प्रकाशको प्रचारले बेबिलोनी (विश्वासी भन्दा कम) हृदय भएकाहरूलाई इतिहासभरि के भयो भनेर देखाउनेछ।
“अनि अर्को स्वर्गदूत स्वर्गको मन्दिरबाट निस्केर आयो, ऊसँग पनि धारिलो हँसिया थियो। अर्को स्वर्गदूत वेदीबाट बाहिर आए, जसको आगोमाथि शक्ति थियो। र ती धारिलो हँसिया भएको मानिसलाई ठूलो स्वरले करायो। किनभने उसको अंगूर पूरै पाकेको छ। अनि स्वर्गदूतले आफ्नो हँसियामा पृथ्वीमा हाने, र पृथ्वीको दाखको बोट बटुल्यो, र परमेश्वरको क्रोधको ठूलो दाखमद्यमा फ्याँक्यो। अनि दाखको कुण्ड सहरको बाहिर कुल्चीयो, र रगत एक हजार छ सय फर्लाङको दूरीमा घोडाको लगामसम्म निस्कियो। ~ प्रकाश १४:१७-२०
येशुले हामीकहाँ पहिलो पटक सुसमाचार ल्याउनुभएको बेलादेखि नै दाखमद्यको यो चलन चलिरहेको छ। तर "१६०० फर्लाङ" को ठाउँको लागि यो परमेश्वरको स्पष्ट स्ट्यान्ड आउट शहर बाहिर गर्नुपर्थ्यो, जुन नयाँ यरूशलेम हो, परमेश्वरको साँचो चर्च।
“मैले एक्लै दाखरस कुल्चेको छु। मसँग कोही पनि थिएन। म तिनीहरूलाई आफ्नो क्रोधमा कुल्चनेछु, र मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुल्चनेछु। तिनीहरूको रगत मेरो लुगामा छर्किनेछ, र म मेरा सबै लुगाहरू दाग गर्नेछु। किनकि बदला लिने दिन मेरो हृदयमा छ, र मेरो उद्धारको वर्ष आएको छ। अनि मैले हेरें, र त्यहाँ मद्दत गर्ने कोही थिएन। र म अचम्ममा परें कि त्यहाँ समर्थन गर्ने कोही थिएन। त्यसैले मेरो आफ्नै हातले मलाई मुक्ति ल्यायो। र मेरो क्रोध, यसले मलाई समर्थन गर्यो। र म आफ्नो क्रोधमा मानिसहरूलाई कुल्चीमिल्ची गर्नेछु, र तिनीहरूलाई मेरो क्रोधमा मातेको छु, र म तिनीहरूको शक्ति पृथ्वीमा ल्याइदिनेछु।” ~ यशैया ६३:३-६
यशैयाको यस शास्त्रपदको सन्दर्भले परमेश्वरको लागि विशिष्ट मानिसहरूलाई शुद्ध पार्नुसँग पनि सम्बन्धित छ। कसरी? झूटा शिक्षा र झूटो उपासनाको भ्रष्टतालाई कुल्चेर। र शहरको सहयोग बिना (स्पष्ट स्ट्यान्ड आउट चर्च), परमेश्वरले अझै पनि काम पूरा गर्नुभयो।
“जाग, जाग, उठ, हे यरूशलेम, जसले प्रभुको हातमा आफ्नो क्रोधको कचौरा पिएछ; तिमीले थरथर काँप्ने कचौराको भित्ता पिउनेछौ, र तिनीहरूलाई बाहिर निकालिदियौ। तिनले जन्माएकी सबै छोराहरूलाई डोऱ्याउने कोही छैन। न त तिनलाई हुर्काएकी सबै छोराहरूको हात समात्ने कोही छैन।” ~ यशैया ५१:१७-१८
किन प्रकाशले घोडाको लगामसम्म पनि रगत बगेको देखाउँछ?
लुगामा रगत, र प्रकाश 14 मा "घोडाको लगाममा" ले न्यायको उग्रता देखाउँदछ। पुरानो नियममा बेबिलोनी वेश्याको एक प्रकार ईजेबेललाई पनि यस्तै भयो।
"अनि उसले भन्यो, उसलाई तल फ्याँक। यसकारण तिनीहरूले तिनलाई तल फ्याँकिदिए, र तिनको केही रगत भित्तामा छर्कियो घोडाहरूमार उसलाई खुट्टामुनि कुल्चायो। ~ २ राजा ९:३३
यो न्याय विशेष गरी पतित "ईसाई धर्म" को झूटा निर्णयहरूमा हो जहाँ तथाकथित "क्रिश्चियन चर्चहरू" को शासक अधिकारीहरूले मानिसहरूलाई तिनीहरूको गलत सन्देशद्वारा नियन्त्रण गर्न आफ्नो अधिकारको दुरुपयोग गर्छन्। तिनीहरूले साँचो निर्दोष ख्रीष्टियनहरूको निन्दा गर्छन् र तिनीहरूको आफ्नै दुष्टतालाई सही ठहराउँछन्। त्यसकारण तिनीहरू "घोडा दुलहीहरू" वा नियन्त्रण गर्ने शक्तिहरूसम्म रगतको दोषी छन्। तिनीहरूले निर्दोषको नराम्रो कुरा गर्न आफ्नो जिब्रो प्रयोग गर्न कटिबद्ध छन्!
"... यदि कुनै मानिसले शब्दमा अपमान गर्दैन भने, त्यो एक सिद्ध मानिस हो, र सम्पूर्ण शरीरलाई लगाम लगाउन सक्षम पनि हुन्छ। हेर, हामी घोडाहरूको मुखमा टुक्रा हाल्छौं, ताकि तिनीहरूले हाम्रो आज्ञा पालन गरून्। र हामी तिनीहरूको सम्पूर्ण शरीर घुमाउँछौं। जहाजहरू पनि हेर्नुहोस्, जो यत्तिका ठूला भए तापनि, र चर्को हावाबाट चलाइएका छन्, तैपनि राज्यपालले जहाँसुकै सुन्नुहुन्छ, उनीहरूलाई धेरै सानो हेल्मको साथ घुमाइन्छ। त्यसरी नै जिब्रो सानो अंग हो, र ठूलो कुराको घमण्ड गर्छ। हेर, कति ठूलो कुरा अलिकति आगो निभाउँछ! अनि जिब्रो आगो हो, अधर्मको संसार: हाम्रो अङ्गहरू माझ जिब्रो पनि त्यस्तै छ, कि यसले सम्पूर्ण शरीरलाई अशुद्ध पार्छ, र प्रकृतिको मार्गमा आगो लगाउँछ। र यो नरकको आगोमा जलाइएको छ। किनकि हरेक किसिमका जनावर, चराचुरुङ्गी, सर्प र समुद्रमा भएका चीजहरूलाई वशमा राखिएको छ, र मानिसजातिलाई नियन्त्रण गरिएको छ। तर जिब्रोले मानिसलाई वशमा राख्न सक्दैन। यो एक अनियन्त्रित दुष्ट हो, घातक विषले भरिएको। यसरी हामी परमेश्वरलाई, पितालाई पनि आशीर्वाद दिन्छौं। र यससँगै हामी मानिसहरूलाई श्राप दिन्छौं, जुन परमेश्वरको प्रतिरूपमा बनेका छौं। एउटै मुखबाट आशीर्वाद र श्राप निस्कन्छ। मेरा भाइहरू हो, यी कुराहरू त्यस्तो हुनुहुँदैन।” ~ याकूब ३:२-१०
धेरै धर्मशास्त्रहरूले आध्यात्मिक अविश्वासको विरुद्धमा परमेश्वरको क्रोधित न्यायको यही ढाँचा देखाउँछन् जहाँ निर्दोषहरूलाई निन्दा गर्न झूटो जिब्रो प्रयोग गरिन्छ। त्यसोभए दाखको कुण्ड आध्यात्मिक ठाउँ हो जुन येशूको वचनले व्यक्तिगत रूपमा कपटको विरुद्धमा न्याय गर्दछ।
"परमप्रभुले मेरो बिचमा मेरा सबै वीर मानिसहरूलाई खुट्टाले कुल्चिउनुभएको छ: मेरा जवान मानिसहरूलाई कुचल्‍नलाई उहाँले मेरो विरुद्धमा एउटा सभा बोलाउनुभएको छ: परमप्रभुले कन्या, यहूदाकी छोरीलाई दाखको कुण्ठमा कुल्‍ल्नुभयो।” ~ विलाप १:१५
प्रभुको लागि प्रभुको दाखबारीको व्यवस्थापन नगर्ने झूटा गोठालाहरूको कारणले गर्दा, परमेश्वरले तिनीहरूमाथि पनि न्याय गर्नुहुनेछ। येशूले चेलाहरूलाई यसो भन्नुभयो।
“यसकारण जब दाखबारीका मालिक आउनुहुन्छ, उहाँले ती किसानहरूलाई के गर्नुहुन्छ? तिनीहरूले उहाँसामु भने, उहाँले ती दुष्ट मानिसहरूलाई नराम्ररी नाश गर्नुहुनेछ, र आफ्नो दाखबारी अरू किसानहरूलाई दिनुहुनेछ, जसले उहाँलाई तिनीहरूको मौसममा फल दिनेछन्।” ~ मत्ती २१:४०-४१
दुष्ट मानिसहरूको दाखको बोटको विरुद्धमा न्यायको थप अभिव्यक्तिमा, हामी व्यवस्थामा यस्तै घोषणा देख्छौं।
"किनकि तिनीहरूको दाखको बोट सदोमको दाखको बोटको हो, र गमोराका खेतहरूका हुन्: तिनीहरूका अंगूरहरू पित्तका अंगूरहरू हुन्, तिनीहरूका गुच्छाहरू तीतो छन्: तिनीहरूको दाखमद्य ड्र्यागनको विष हो, र एस्प्सको क्रूर विष हो।" ~ व्यवस्था ३२:३२-३३
आध्यात्मिक बेबिलोनलाई विशेष गरी दोषी र यो न्यायको योग्यको रूपमा नाम दिइएको छ।
"किनभने सबै जातिहरूले उसको व्यभिचारको क्रोधको दाखरस पिए, र पृथ्वीका राजाहरूले उनीसँग व्यभिचार गरेका छन्, र पृथ्वीका व्यापारीहरू उसको स्वादिष्ट भोजनको प्रशस्तताले धनी भएका छन्।" ~ प्रकाश १८:३
पुरानो नियमका भविष्यवाणीहरूले पनि यसलाई प्रतिबिम्बित गर्दछ।
"बेबिलोनको बीचबाट भाग्नुहोस्, र हरेक मानिसलाई उसको प्राण छुटकारा दिनुहोस्: त्‍यसको अधर्ममा नछोड। किनकि यो परमप्रभुको बदला लिने समय हो। उसले उसलाई प्रतिफल दिनेछ। बेबिलोन परमप्रभुको हातमा सुनको कचौरा भएको छ, जसले सारा पृथ्वीलाई मातेको छ। राष्ट्रहरूले त्यसको दाखमद्य पिए। यसकारण राष्ट्रहरू पागल छन्।” ~ यर्मिया ५१:६-७
शहर बिना दाखमद्य-प्रेस 1600 फर्लाङ हिँडेको प्रकाशमा के हो?
सुसमाचारको न्याय परमेश्वरको साँचो आध्यात्मिक मण्डली, परमेश्वरको उत्कृष्ट शहरबाट स्पष्ट पारिएको छ। त्यसोभए एक साँचो स्ट्यान्डआउट शहरको दृष्टिकोणबाट, यो देख्न सकिन्छ कि "१६०० फर्लाङहरू" को लागि निर्णय अझै पनि पूरा भएको थियो, शहर बिना पनि (स्पष्ट स्ट्यान्डआउट चर्च।)
“मैले एक्लै दाखरस कुल्चेको छु। मसँग कोही पनि थिएन। म तिनीहरूलाई आफ्नो क्रोधमा कुल्चनेछु, र मेरो क्रोधमा तिनीहरूलाई कुल्चनेछु। र तिनीहरूको रगत मेरो लुगामा छर्किनेछ, र म मेरा सबै लुगाहरू दाग गर्नेछु।” ~ यशैया ६३:३
यो 1600 फर्लाङले समयलाई प्रतिनिधित्व गर्दछ र 1260 वर्षहरू समावेश गर्दछ जब वचन र आत्माले भाङ्ग्रा र खरानीमा पहिरिएर भविष्यवाणी गरेको थियो। (प्रकाश ११:३ र १२:६ हेर्नुहोस्) र यसले समयका दुई प्रोटेस्टेन्ट युगहरू समेट्छ जुन साढे तीन शताब्दीको नजिक छ।
को सुरु देखि स्मिर्ना को अन्त्य सम्म सार्डिस (फिलाडेल्फियाको सुरुवात): 1260 वर्ष र लगभग साढे तीन शताब्दी लगभग 1600 वर्ष बराबर। इतिहासमा, कतैबाट AD 270 वा 280 को आसपास 1880 सम्म। यी मितिहरू सबै अनुमानित हुन्, तर 1600 वर्षको अवधिलाई नजिकबाट प्रतिबिम्बित गर्दछ।
एसियाका सात मण्डलीहरूको समयरेखा बुझ्नेहरूले यो समयको अवधिलाई बुझ्छन् जब त्यहाँ कुनै स्ट्यान्ड आउट (भ्रष्टचारबाट स्पष्ट) चर्च थिएन। त्यसकारण यस समयमा परमेश्वरको क्रोधको दाखमद्यको प्रेसलाई कुल्दाउनु आवश्यक थियो।
7 चर्चहरूको नक्सामा 1600 Furlongs
१६०० फर्लाङ/वर्षहरूमा थप स्पष्टीकरणको लागि: यदि तपाईंले प्रकाशको पहिलो पटक लेखिएको बेला एसियाका सातवटा चर्चहरू भौतिक रूपमा कहाँ अवस्थित थिए भन्ने नक्सा निकाल्नुभयो भने, तपाईंले तिनीहरू एक अर्काको तुलनात्मक रूपमा नजिकको गोलाकारमा अवस्थित छन् भनी पाउनुहुनेछ। एसिया माइनरमा क्रमिक ढाँचा (तिनीहरू वर्तमान टर्की भित्र अवस्थित हुन्थ्यो।)
यहाँ सात मण्डलीहरू अवस्थित भएको नक्सा छ:
त्यसोभए यदि तपाईंले प्रकाशमा उल्लिखित एशियाका सात सहरहरूको पुरानो नक्सामा यसलाई हेर्नुभयो भने: प्रकाशमा फेला परेको समान क्रमिक क्रमलाई पछ्याउँदै, स्मिर्नाबाट सुरु हुने अनुमानित दूरी, पर्गामोस, त्यसपछि थिआटिरा, त्यसपछि सार्डिस र अन्त्य हुँदै। फिलाडेल्फिया मा, लगभग 1600 furlongs को दूरी छ। (एउटा पुरातन फर्लाङ, वा ग्रीक स्टेडिया ६०७ देखि ६३० फिटको बीचमा हुन्छ। तपाईंले गुगल नक्सामा १६०० फर्लाङको यो दूरी प्रमाणित गर्न सक्नुहुन्छ, माथि देखाइएको लिङ्क, जहाँ नक्सामा एसियाका सातवटा पुरातात्विक स्थलहरू पहिचान गरिएको छ। )
तपाईं ती शहरहरू बीचको कुनै पनि अन्य बाटो यात्रा गरेर उही 1,600 फर्लाङ मापनमा आउन सक्नुहुन्न। त्यसैले फर्लाङहरूमा भौगोलिक दूरी वर्षहरूमा ऐतिहासिक समयरेखाको बराबर छ: "१,६०० फर्लाङको ठाउँ" AD 270 (Smyrna) बाट AD 1880 (फिलाडेल्फिया) सम्मको 1,610 वर्षको धेरै अनुमानित छ। र फेरि यी ऐतिहासिक मितिहरू सबै अनुमानित छन्, जसले वास्तवमा 10 को भिन्नताको लागि बनाउँछ। मितिहरू राख्ने हाम्रो क्षमता हाम्रो बुझाइमा सीमितताहरू, र इतिहासकारहरूले इतिहासमा रेकर्ड गरिएका मितिहरूको शुद्धताको सीमाहरूमा सीमित छ। तर परमेश्वरको दूरी र समय दुवैको बुझाइ सिद्ध छ।
परमेश्वरको मार्गले प्रायः प्रचारकलाई प्रयोग गर्दछ पहिले उनीहरूलाई परमेश्वरको वचन मार्फत न्याय प्राप्त गर्न। त्यसपछि यो क्रोधित चेतावनी पछ्याउँदै, परमेश्वरले अन्ततः आफ्नो क्रोधलाई अन्तिम तरिकामा कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ।
“किनकि इस्राएलका परमप्रभु परमेश्वरले मलाई यसो भन्नुहुन्छ; यस क्रोधको दाखमद्यको कचौरा मेरो हातमा लिनुहोस्, र म तिमीलाई पठाउने सबै राष्ट्रहरूलाई यो पिउन लगाउनुहोस्। अनि तिनीहरू पिउनेछन्, र उत्तेजित हुनेछन्, र पागल हुनेछन्, किनभने मैले तिनीहरूका बीचमा पठाउने तरबारको कारणले। तब मैले परमप्रभुको हातमा कचौरा लिएँ, र सबै राष्ट्रहरूलाई पिउन लगाएँ, जसलाई परमप्रभुले मलाई पठाउनुभएको थियो।" ~ यर्मिया 25:15-17
त्यसोभए हामी पशु-जस्तो, बेबिलोनी धर्मको अविश्वासको विरुद्धमा परमेश्वरको यो महान न्यायको साथ के गर्ने छौं? के यसले हामीलाई पागल बनाउँछ? वा के यसले हामीलाई हाम्रो हृदयलाई सही बनाउन र आउने क्रोधबाट भाग्ने कारण दिन्छ? के हामी अझै “बेबिलोनबाट निस्केका” छौं?
कोटीहरू7औं तुरही, झुटो फैसला, प्रकाश १४, धर्मी न्यायाधीश ट्यागहरू 1260 दिन, तीतो, रगत, विश्वासी साक्षी, वेश्या, पाखण्ड, न्याय, क्रोध पोस्ट नेभिगेसन